Daabacaadda Buugga, Daabacaadda Buugga Shiinaha, Daabacaadda Buugga Sawirka - daabacaadda Aqoonta
Hadafkayaga ah horumarinta suuqyada maxalliga ahi waa inaan ugu adeegno faceenkeenna si wanaagsan waxsoosaarka wanaagsan. Hadafkayaga horumarinta suuqyada dibedda waa inaan ka hadalno alaabada laga sameeyay Shiinaha.
Waxyaabaha ugu waa weyni waa sanaadiiqda, bacaha waraaqaha, buugaagta, kaararka salaanta, iwm. Warshaddeenu waxay ku taalaa Jimo, Qingdao waxayna leedahay khibrad wax soo saar hodan ah oo ka badan 16 sano.
Daabacaadda Buug-yaraha Jumladda ah oo Jaban oo leh Buuxin B ...
Hadafkayaga ah horumarinta guryaha guriga waa inaan ugu adeegno faceenkeena si wanaagsan alaabada wanaagsan. Hadafkayaga horumarinta suuqyada dibedda waa inaan ka hadalno alaabada laga sameeyay Shiinaha.